'၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ရေကျော် သီတင်းကျွတ် မီးထွန်းပွဲတော်' စတင်ကျင်းပ ရာသီဥတု အခြေအနေ မကောင်းမွန်မှုေ? - Yangon Media Group
‘၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ရေကျော် သီတင်းကျွတ် မီးထွန်းပွဲတော်’ စတင်ကျင်းပ ရာသီဥတု အခြေအနေ မကောင်းမွန်မှုေ?
”၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ရေကျော် သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော်”ကို စတင်နေပြီဖြစ်သော်လည်း လက်ရှိရာသီဥတုအခြေအနေမကောင်း မွန်ခြင်းကြောင့် စိုးရိမ်မှုအချို့ရှိနေ ကြောင်း ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်နိုင်ကပြောသည်။ ”ပွဲဈေးကတော့ ဒီနေ့ (အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်)ကစတယ်။အခု ရာသီဥတုအခြေအနေကလည်း မကောင်းတဲ့အခါကျတော့ ပွဲပျက်မှာကိုတော့လန့်နေတာပေါ့ နော်။ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း မိုးတားတာတွေ ဘာတွေတော့ လုပ်ထားပါတယ်။ စိတ်လည်းပူ နေတယ်။ အရင်တုန်းကလည်း ရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့် တစ်နှစ်ပွဲပျက်သွားဖူးတော့ စိုး ရိမ်တာပေါ့နော်”ဟု ဦးအောင်နိုင်ကပြောသည်။
ရေကျော်သီတင်းကျွတ်မီး ထွန်းပွဲတော်ကို အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၅ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ပုဇွန်တောင် (၇) ရပ်ကွက်၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ (၁ဝ) ရပ်ကွက် ၊ ဗိုလ်တထောင် (၁ဝ) ရပ် ကွက်နှင့် မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ရေ ကျော်တို့တွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။ မီးထွန်းပွဲတော်ကို ရပ်ကွက် ၅ ခုတွင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ရပ်ကွက်တစ်ခုတွင် ဆိုင်ခန်းပေါင်း ၁ဝဝ နီးပါးရှိခြင်းကြောင့် ရပ် ကွက် ၅ ခုတွင် ဆိုင်ခန်းပေါင်း ၅ဝဝ နီးပါးဖြင့် စည်ကားစွာပြုလုပ် သွားမည်ဖြစ်သည်။ ရေကျော်သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော်သည် လူအစည်ကား ဆုံးသော ရန်ကုန်မြို့၏ဈေးပွဲ တော်တစ်ခုဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၅ဝ နီးပါးခန့်မှ စတင် ကာပြုလုပ်ခဲ့သော ဈေးပွဲတော် တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
”ဒီနှစ်က ဘယ်နှနှစ်မြောက် ပြုလုပ်တာလဲဆိုတာတော့ ကျွန် တော်လည်း သေချာတော့မပြော တတ်ဘူး။ ရေကျော်ညဈေးဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်လေးကတည်းကရှိခဲ့တာလေ။ အခုဆိုရင်တော့ နှစ်ပေါင်း ၅ဝ လောက်ရှိရောပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ ၂ဝ၁၁ က စပြီးတော့ တာဝန်ယူ လုပ်ပေးခဲ့တာဆိုတော့ ဒီနှစ်ဆိုရင် ၈ နှစ်လောက်တော့ရှိပြီ”ဟု ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။ ရေကျော်ဈေးပွဲတော်တွင် အစားအစာအသောက်မျိုးစုံပါဝင် သော ဈေးတန်းများ၊ ကလေးငယ် များဆော့ကစားနိုင်သော ကစားကွင်းများအပါအဝင် အလှမွေးငါး ချစ်သူများအဖွဲ့ကလည်း ပါဝင်အားဖြည့် ပြသသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကာတွန်းဆရာများမှရေးဆွဲထား သော ကယ်ရီကက်ချာများကိုလည်း ပြသခြင်းနှင့် တီရှပ်များပေါ်တွင် လည်း ကာတွန်းပုံများရေးဆွဲပေး ခြင်းအစီအစဉ်များလည်း ပါဝင်သည်။
ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်အ နေဖြင့် Hip Hop & Rapper အဆိုတော်များ၏ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှု၊ နိုင်ငံကျော်မြန်မာသံ အဆိုတော်များ၏ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှု၊ ဟားတစ်သိုက်အငြိမ့် အဖွဲ့၏ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုနှင့် ကိုနိုင်ဇော် Music Band နှင့် နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်များ၏ဖျော် ဖြေတင်ဆက်မှုများဖြင့် တင်ဆက် ဖျော်ဖြေကြမည်ဖြစ်သည်။ ရေကျော်သီတင်းကျွတ်မီး ထွန်းပွဲတော်အတွက် လုံခြုံရေး အစီအစဉ်များအတွက်လည်း ပွဲ ဈေးတစ်လျှောက်လုံးတွင် CCTV များတပ်ဆင်ထားပြီး အချိန်ပြည့် စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ တပ်ဖွဲ့မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေး ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အလိုက် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ဝင် များနှင့် ရပ်ကွက်အလိုက် လူငယ် များမှလည်း တာဝန်ယူကာ လုံခြုံ ရေးပိုင်းကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ် ကုန်ပစ္စည်းများအပေါ် ကုန်သွယ်ခွန် ဒေါ်လာဘီလီယံ ၂ဝဝ အမေရိကန် တိုးမြှင့်မည်
မလှိုင်မြို့နယ်တွင် ဆင်တုပ်ကွေးဖြစ်ပွားမှုများပြားနေသဖြင့် ကျန်းမာရေးဌာနမှ ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးနေ